कालो हंस र मूंगफलीको बटर र जेली स्यान्डविच | Martech Zone
कालो हंस र मूंगफलीको बटर र जेली स्यान्डविच
आइतबार, डिसेम्बर 2, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
केहि हप्ता पहिले मैले यो प्रयोग गरेको पढ्ने स्तर हेर्न मेरो ब्लगको विश्लेषण गर्न सेवा प्रयोग गरें। म अलि अलि पछि गएँ कि साइट जुनियर हाईस्कूल स्तरमा छ। एक उत्सुक पाठक र ब्लगरको रूपमा, मैले जुनियर हाई स्कूलको भन्दा राम्रो गरिरहेको हुनुपर्दछ, हैन? यसलाई केहि थप सोच दिँदै, म पक्का छैन कि मसंग केहि लाज लाग्न सक्छ।
कसरी बदामको बटर र जेली स्यान्डविच बनाउने
मेरो एक मनपर्ने अंग्रेजी प्रोफेसरले एक पटक लेखन व्यायामको साथ हाम्रो कक्षा खोल्यो, कसरी बदामको बटर र जेली स्यान्डविच बनाउने। निर्देशनहरू लेख्न हामीसँग 30० मिनेट जति राम्रो थियो र अर्को दिन, उनले बदाम बटर, जेली, रोटी र एउटा बटरको चक्कु ल्याएर हामीलाई चकित पारे।
हाम्रो राम्रो प्रोफेसर त्यसपछि निर्देशनहरू अनुसरण गर्न र स्यान्डविच बनाउन शुरू गर्यो। अन्तिम उत्पादन संक्षिप्त दिशाहरूसँग जति धेरै वर्णन गरिएकोसँग प्रकोप थियो। सायद रमाईलो व्यक्तिहरू त्यस्ता थिए जसले कहिले पनि कुनै चाकूको प्रयोग नगरेका थिए। यो मैले लिएको पहिलो अंग्रेजी कक्षा थियो कि म कडा हँसाएर पेट दुख्ने साथ बाहिर निस्के। पाठको बिन्दु मसँग अडिए, यद्यपि।
छोटो वाक्यहरू, संक्षिप्त वर्णनहरू, सरल शब्दावली र छोटो लेखले तपाईंलाई जूनियर हाई स्कूल पढ्ने स्तरमा लैजान सक्छ, तर यसले तपाईंको ब्ल्ग (वा पुस्तक) पनि धेरै व्यापक श्रोताहरू खोल्छ जुन जानकारीलाई बुझ्दछ। मलाई लाग्छ यदि मेरो ब्लगमा पढ्ने स्तरको लागि मेरो लक्ष्य छ भने, यो हुनसक्छ कनिष्ठ हाई स्कूल! यदि म टेक्नोलोजी बुझाउन सक्छु मसँग १ work वर्षको उमेरसँग काम गर्ने छु, तब that's० बर्षको कसैलाई पक्कै पनि पचाउन सकिन्छ!
नसीम निकोलस तलेब द्वारा ब्ल्याक हंस
यो यस्तो मनोवृत्ति हो जुन मैले पुस्तक खोल्छु कालो स्वान र पठनको एक महिनामा पहिलो pages० पृष्ठहरू मार्फत प्राप्त गर्न सक्दैन। एउटा जस्तो अमेजन आलोचक यो राख:
[अध्याय १ through देखि १ 15 सम्ममा]… पुस्तकको बाँकी अंश निराशाजनक छ। सयौं पृष्ठहरुको सार मात्र लेख्न सकिन्छ कि हामी दुर्लभ घटनाहरुको भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौं।
Whew! भगवानलाई धन्यवाद दिनुहोस् म एक मात्र होइन! यो पुस्तक दर्दनाक थियो। अचम्म मान्नु पर्दैन किन मान्छेले आज कल ब्लगलाई यति धेरै सराहना गर्छन्। म न्यु योर्क टाइम्सको बेस्टसेलर लेख्न कोशिस गरिरहेको छैनँ, न त म आइभी-लिगूयरलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेको छु। मँ यो चीजलाई म व्याख्या गर्न कोशिस गरिरहेको छु यत्तिको म यसलाई साझेदारी गर्न सक्दछु र तपाईं यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ।
शब्दहरू म ब्ल्याक ह्यान वर्णन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछु: बमब्यास्ट, चट्टी, डिफ्यूज, डिचर्सिभ, चापलुसी, गार्बियस, फुलेको, लम्बाई, लामो-घुमाउरो, लक्वियस, स्फटिक, सुखद, प्रोलिक्स, रम्बलिंग, बेमानी, अभद्र, दिक्क लाग्ने, टर्गीड, वर्बोज, भोल्युबल, बतास (धन्यबाद Thesaurus.com)
यदि तलेबले लेखेका भए कसरी बदामको बटर र जेली स्यान्डविच बनाउने, मेरो प्रोफेसर अझै पनी यसमा काम गरिरहेको हुन सक्छ - र यो शful्कास्पद छ यो वास्तवमा सैंडविच जस्तो देखिनेछ।
त्योले भन्यो, म फर्केर आउनेछु र आलोचकको सल्लाह लिने छु र अध्याय १ through देखि १ reading पढ्ने गर्छु। र सायद राम्रो बदाम बटर र जेली स्यान्डविच क्रममा छ! पढ्ने स्तर विश्लेषणको लागि, धेरै ध्यान नदिनुहोस् ... थिसौरसबाट सम्मिलित गरिएको एक अनुच्छेदले तपाईंलाई निछाड्न सक्छ। 😉
टैग: मार्केटिंग पुस्तकनसीम टेलबकालो हंस
ब्ल्गरको रगत फोहोर एसईओ गलत सूचना फैलियो
किन र मध्यम बुझ्दै ...
डिसे 3, 2007 मा 8: 24 AM
वास्तवमा, लेखन विज्ञहरूका अनुसार, "राम्रो" गर्नु भनेको तल्लो स्तरको स्तरमा लेख्नु हो। यो देशमा औसत पढाइको स्तर ६ कक्षा हो र सबै पत्रपत्रिकाहरू त्यही तहमा लेखिन्छन्। राम्रो मार्केटिङ कम्युनिकेशन लेखकहरूले पनि उच्च स्तरको सट्टा यस स्तरमा लेख्नेछन्। यसले तिनीहरूको प्रतिलिपिलाई पढ्न र बुझ्न धेरै सजिलो बनाउँछ, त्यसैले यसले हाम्रो जीवनको सबै अव्यवस्थालाई काट्छ, र यसरी, यो मनाउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। (तिनीहरू पनि "र यसरी" भन्दैनन्।)
मैले ब्ल्याक स्वान पनि पढेको छु, र यो पीडादायी छ। म चाहन्छु कि तपाईंले यो ब्लग लगभग पाँच अध्याय पहिले पोस्ट गर्नुभयो र मलाई यो यातनाबाट बचाउनु भएको थियो।
डिसे 3, 2007 मा 9: 50 AM
ब्ल्याक स्वानमा तपाईंको लिनेहरूको लागि डग, र तपाईंको टिप्पणीकर्तालाई आशीर्वाद दिनुहोस्। यसले मलाई एक कप्ला सेकोनलजस्तै प्रभाव पार्छ– किताबको साथ १० मिनेट र म गएँ। हिजो राती म 10:8 मा सुत्न गएँ!
तिम्रो केटा नसिम जसलाई म साकिया भन्छु – स्मार्ट गधा सबै थाहा छ। उसले मेरो काम गर्ने उच्च ब्रोको परिभाषासँग पनि मिल्दोजुल्दो छ – जसको शिक्षा उसको बुद्धिभन्दा बढी छ। कसैले यो स्मार्मी पंकलाई बिचस्ल्याप गर्न आवश्यक छ - cabbies को लागि $100 सुझावहरू छोडेर।
रिकभरी इकोन प्रमुखको रूपमा, हामीसँग ब्ल्याक स्वान्सको नाम थियो। हामीले तिनीहरूलाई "बाह्य घटनाहरू" भन्यौं, र तिनीहरूले सधैं हाम्रा सबै सफा भविष्यवाणी सिद्धान्तहरू क्र्याप गरे। इकोन मेजरहरूसँग यी चीजहरूको अधिक सामान्य समझ छ - अप्रत्याशित घटनाहरू अप्रत्याशित छन्।
डिसे 3, 2007 मा 9: 51 AM
डेरेकले अखबारहरू इत्यादिको बारेमा उल्लेख गरेझैं, मैले कतै पढेको छु (प्रसिद्ध लास शब्दहरू दायाँ:) जुन TIME ले 6th-7th कक्षाको पढाइ स्तरको लागि शूट गर्छ जब तिनीहरूका कथाहरू सबै मानिसहरूलाई पढ्न सजिलो बनाउनको लागि।
मैले विभिन्न ब्लगहरूमा पढेको केही उत्कृष्ट पोस्टहरू केही छोटो वाक्यहरू हुन् जसको अर्थ छ, मलाई लाग्छ सेठ गोडिन यसको मास्टर हुनुहुन्छ।
डिसे 4, 2007 मा 4: 59 AM
मैले "जुनियर हाई" पनि पाएँ।
साइट काम गरिरहेको छ भने मलाई कसरी थाहा छ? के त्यहाँ कुनै ब्लग छ जुन पढ्न गाह्रो छ?
डिसे 12, 2007 मा 1: 46 AM
मलाई लाग्छ कालो स्वान आजको बजारमा हामीले सामना गरिरहेको वास्तविक जोखिमलाई बुझ्नको लागि मार्केटरहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। यस पुस्तकमा, तपाईंले शक्ति र नियन्त्रणको बारेमा अरू कतै भन्दा बढी सिक्नुहुनेछ। शक्ति र नियन्त्रणले नराम्रो झटका पाउँछ - आखिर, मार्केटरहरूले हरेक दिन मानिसहरूलाई विश्वस्त गर्दैछन् र यी दुई राम्रा प्रेरक लक्षणहरू हुन्? मलाई लाग्छ।
यद्यपि पढ्न सजिलो छैन तर सबै प्रकारका निर्णय निर्माताहरूको लागि यो सिफारिस गर्दछ।